Ciyaartii Ivory Coast iyo Senegal oo rabshado ku dhamaatay [Sawiro] • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Ciyaartii Ivory Coast iyo Senegal oo rabshado ku dhamaatay [Sawiro]
Ciyaartii Ivory Coast iyo Senegal oo rabshado ku dhamaatay [Sawiro]
October 14, 2012 - By: Khalid Yusuf
Waxaa xalay (Sabti) ciyaar isreeb reebka koobka Afrika ay dalkaasi Senegal ku dhexmartay labada xul ee dalalka Ivory Coast iyo Senegal.
Ciyaartan ayaa ka dhaceysay xalay Istadiyumka Leopold Sedar Senghor ee ku yaal magaalada DAKAR ee dalka Senegal.
Ciyaarta ayaa la joojiyey markii ay ka dhineyd 14 daqiiqo, ayadoo kooxda Ivory Coast ay markaasi ku horeysay labo gool oo uu dhaliyey laacibkii hore ee Chelsea Mr. Didier Drogba.
Ciyaartan ayaa la joojiyey kadib markii taageerayaasha martida loo ahaa ee Senegal ay bilaabeen rabshado, ayagoo dhagaxaan iyo dhalooyin kusoo tuureen garoonka ciyaarta ka socotay, waxayna sidoo kale weeraro ku qaadeen taageerayaasha martida ahaa ee Ivory Coast.
Dhowr qof ayaa ku dhaawacmay rabshadahan waxaana gebi ahaan la joojiyey ciyaarta, ayadoo la filayo in dhibcahaasi ay qaadan doonaan xulka Ivory Coast, ayadoo la filayo in ganaax loo jaro kooxda Senegal oo ay taageerayaashooda rabshadahan dhigeen.
Kadib markii ciyaarta la joojiyey ayey weli iska horimaadyo kasii socdeen banaanka Istadiyumka iyo jidadka ku dhaw dhaw, booliiska Senegal ayaa sidoo kale la sheegay inay xireen qaar badan oo kamid ah dadkii rabshadaha dhigayey.